Daruuro ka samaysan ciidda duufaan ka dhacay lamadegaanka Gobi oo dul hoganaya tuulo ka tirsan Shiinaha | Xarshinonline News
Daruuro ka samaysan ciidda duufaan ka dhacay lamadegaanka Gobi oo dul hoganaya tuulo ka tirsan Shiinaha
Posted by xol2 on June 1, 2010 · Leave a Comment
Hargeysa, (NNN)- Tuulo yar oo ku taala badhtamaha waddanka Shiinaha ayaa gebi ahaanteedaba qarsoontay ka dib markii uu ku kacay duufaan ka dhashay lamadegaan ay ku dhex taalo tuuladani. Tuulada oo dhammaan dhismayaasha ka dhisani ay u samaysan yihiin qaab iyo midab isku mid ah, waxa ay mar kale ka sinmeen muuqaalkii ay hore u wadaagayeen.
Dhammaan dadkii tuulada deggenaa waxa ay isku xereeyeen guryahooda oo ay u xidhan yihiin albaabada iyo daaqaduhu iyada oo duufaankuna halkii daqiiqaba kor ugu sii kacayey qiyaas 70 fuudh ah.
Maalintii ayaa habeen isku rogtay iyada oo boodhkii duufaanku uu si ku meel-gaadh ah u daboolay qorraxda isla markaana yareeyay iftiinka ilaa 600 fuudh oo dhulka ah. Haseyeeshee, si lamafilaan ah ayuu u dagay duufaanku isaga ka tagay daruur dhulka ka sarraysa joog ah hal Mayl taas oo markii dambe dadkii tuulada u sahashay inay dib u nadiifiso dhammaan boodhkii uu kaga tagay.
Tuuladan oo magaceeda la yidhaahdo Golmud isla markaana ay ku nool yihiin dad tiradoodu gaadhayso 200,000 oo qof, waxa ay barbarka ku haysaa magaalo-warshadeed dhinaca ku haysa lamadegaanka ugu weyn qaaradda Eeshiya ee Gobi.
In kasta oo aanay ahayn meel ku habboon in lagu noolaado, tobanaan kun oo qof ayay hoy u tahay kuwaas oo ka shaqeeya meelaha milixda laga soo saaro ee gobolkan.
Has your friend read your website today?
Haseyeeshee, jacaylka loo qabo shaqo wanaagsan iyo meelo badan oo lagu noolaado waxa ay ku timaaddaa haysasha lacag badan. Sannad kasta xilliga guga, dabaylo xoog leh ayaa ka dhaca lamadegaanka Gobi waxaanay oo sameeyaan taagag ka samaysan boodh iyo ciid kuwaas oo marka roobku ku baaha meelaha ka ag dhow. Boodhka duufaanku waxa uu sababi karaa dhibaatooyin joogto ah oo ay ka mid yihiin korontada oo go’da, dib u dhac ku yimaadda gaadiidka iyo weliba xannuunno dhanka neefsashada ah.
Camuudda lamadegaanka Gobi xataa waxa ay gaadhaa ilaa magaalo-madaxda Shiinaha ee Beijing taas oo ugu dhawaan sannad walba magaalada ku reeba malaayiin tan oo ciid ah.
Wax ka badan afar-meeloodaw meel dhulweynaha Shiinaha, waxa ku daboolan ciid oo marka lagu daro lamadegaanka Gobi noqonaysa inay ku daboolan tahay dhammaan qaybaha woqooyi ee dalkaas.
← Cajiib: Laba-sanno jir maalintii Qiijiya 40 xabbo oo sigaar ah
Maxkamadda Sare ee Maraykanka oo go’aan ka soosaartay dacwada Gen. Maxamed Cali Samatar →